I-Raw Material Control
Sikhetha isihlabathi sequartz sekhwalithi ephezulu enkwalini yethu futhi samukela uhlelo oluqinile lokulandela umkhondo, oluqinisekisa ikhwalithi ethembekile yamatshe e-quartz amatshe akha imvelaphi.Izinto zethu zokusetshenziswa zihambisana nenqubo yokuvikela imvelo, futhi i-slab ekhiqiziwe igunyazwa iminyango egunyaziwe futhi ngaleyo ndlela ikhwalithi ethembekile yemikhiqizo ye-APEX iqinisekisiwe.
A: Wonke ama-slab akhiqizwa futhi ahlolwe ngezindinganiso eziqinile ukuze kuhlangatshezwane nayo yonke imininingwane yobuchwepheshe ekukhiqizeni okuhamba phambili emhlabeni.
B: Sithengela umsebenzi ngamunye umshwalense, omunye umshwalense wezingozi, ohlanganisa ukulimala ngengozi kanye nokwelashwa ngengozi.Ngale ndlela, izisebenzi ezisengozini yengozi emsebenzini zinganxeshezelwa yinkampani yomshwalense.Kukhona nomshwalense wezikweletu.Lokhu kwenzeka futhi uma isisebenzi sithola izingozi ezithile emsebenzini, futhi uma inkampani kudingeka ukuthi isinxephezelise, inkampani yomshwalense inganxephezela.
Ithimba lethu elilawula ikhwalithi elikhethayo lihlala liqinisekisa ukuthi isilabhu ngasinye sisezingeni eliphezulu ngekhwalithi ethengiswayo
Asihloli imininingwane ye-slab hhayi kuphela ohlangothini olungaphambili kodwa nangemuva ukuze siqiniseke ukuthi ucezu ngalunye luwubuciko obuhle ngaphambi kokuletha kuwe.
Ama-slabs ethu athole ukuqinisekiswa kwekhwalithi kumakhasimende emhlabeni wonke.
I-APEX izuze izitifiketi ze-SGS, Greenguard.Imikhiqizo isebenzisa izinto eziphephile nezivumelana nemvelo ukuxhumana ngqo nokudla.Banikeza isiqinisekiso sokuphepha nokuvikelwa okuphezulu kumakhasimende.
Inqubo Yokukhiqiza Yesayensi
Imikhiqizo ye-Apex Quartz ikhiqizwa ngamazinga aphezulu kakhulu.
I-Apex Packing and loading
IQuartz Marble Price IEngineered Stone Market Intengo yeQuartz Countertops Itshe lequartz elimpunga IQuartz Countertops engcono kakhulu yomkhiqizo AmaQuartz Countertops Slabs